Xalaal Safarka Dhaka - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteellada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Kooxda Socdaalka eHalal
Iibso Cuntada Xalaasha ah
Calaamadaha Cuntada Xalaasha ah
Hubinta Cuntada Xalaasha ah
Hantida Dijitaalka ah
Safarka Xalaasha ee Bangladesh
Xalaal Safarka Dhaka
Xaaladda Covid-19 ee Bangladesh
Dhaka (oo hore Dhaka Ingiriisiga) waa caasimada iyo magaalada ugu weyn ee Bangladesh. Waa magaalada ugu weyn dadka ku nool gobolka taariikhiga ah ee Bengal iyo magaalo weyn oo ku taal Koonfurta Aasiya. Dhaka waxay u soo baxday magaalo caalami ah xilligii Boqortooyada Mughal. Waxay xarun u tahay ganacsiga iyo dhaqanka, taariikh dheerna ku leh caasimadda Bengali. Waxaa loogu yeeray Magaalada Masaajidada iyo Dalxiiska Bariga, qaab dhismeedkeeda islaamiga ah awgeed iyo webi ku teedsan Buriganga (Old Ganges). Waxaa sidoo kale loo yaqaan Rickshaw Caasimada Aduunka, Maaddaama ay jiraan in ka badan 500,000 rickshaws baaskiil oo waddooyinkeeda ku socda. In kasta oo lagu tilmaamo inay tahay hawd la taaban karo, Dhaka waxay leedahay meelo cagaaran oo sharaf leh, oo ay ku jiraan beero badan iyo jardiinooyin. Maanta, Dhaka waa caasimada labaad ee Koofurta Aasiya ka dib Delhi iyo xarun dhaqaale oo muhiim ah oo ay weheliso Mumbai iyo Karachi.
Dhaka casriga ahi waa magaalo kobcaya, midab leh oo cidhiidhi badan. Ahaanshaha mid ka mid ah meelaha ugu cufnaanta badan meeraha, Dhaka wuxuu noqon karaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan adduunka. Wadooyinkeeda iyo webiyaasheeda waxaa ka buuxa fowdo midabo badan leh. Magaaladu waxay martigelisaa tirada rickshaws-ka adduunka ugu badan. Dhaka sidoo kale waa xarunta warshadaha dharka ee Bangladesh, waa madaxa ugu sarreeyaa ee dalka ka soo gala sarrifka lacagaha qalaad. La kulan magaalada markii ugu horeysay waxay umuuqataa mid xad dhaaf ah.
Dhaka waxay daboolaysaa 360 km² (140 sq mi) qaybta hoose ee gacanka Ganges. Waxaa xaduud ku leh Webiyadaha Buriganga, Dhaleshwari iyo Turag; iyo biyo mareenadooda badan iyo wabiyada. Dhulku wuxuu ku dhow yahay heerka badda. Dhaka ayaa u nugul daadadka daadadka inta lagu guda jiro xilliga monsoon.
Macnaha dhabta ah ee magaca Dhaka waa "qarsoon yahay". Magaca halista ah ayaa laga yaabaa inuu asal ahaan ka soo jeedo dhak geedaha laga helay deegaanka; ama laga soo qaatay Macbadkii Dhakeshwari ee Qarnigii 12aad ee Hinduuga.
Qarnigii 17aad Mughal Lalbagh Fort
Degsiimooyinkii ugu horreeyay ee gobolka waxay taariikh ahaan dib u noqdeen 2,500 oo sano. Dhaka waxay ahayd caasimadii hore ee Bengal xiligii Boqortooyadii Mughal ee qarnigii 17aad. Maaddaama ay tahay xarunta maamulka iyo ganacsiga ee Bengal Delta, oo ah gobolka ugu hodansan uguna wax-soo-saarka badan Boqortooyada, waxay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna horumarsan Aasiya. Magaalada Mughal Dhaka oo loogu dhawaaqay inay tahay caasimada gobolka sanadkii 1608, waxaa ku noolaa hal milyan oo qof, oo leh jardiinooyin si wanaagsan loo dhisay, taallo, qabriyaal, qalcado, masjid, macbadyo, kaniisado iyo gawaari iyo kaniisado. Magaalada waxaa deganaa ganacsato Armeniya, Beershiyaan, Gariig, Carab, Boortaqiis, Faransiis, Holland iyo Ingriis. Webiyaasheeda wabiyadeed ayaa mar qudha lagu soo bandhigay guryo waaweyn oo aad u qurux badan magaaladana waxaa lagu tilmaamay inay tahay Dalxiiska Bariga. Degmada Dhaka waxay caan ku ahayd aduunka oo dhan dharka suufka suufka wanaagsan. Shirkadda British East India waxay la wareegtay magaalada 1793.
Ingriiska Bengal, Dhaka iyo magaalada la dhalatay ee Kolkata waxay ku ciyaareen sheeko labo magaalo oo gobolka ah, taas oo si weyn u saameysay koorsooyinka dhacdooyinka British Raj. Qeybtii muddada-gaaban ee Bengal ee 1905 waxay dhidibbada u taageen magaalada Dhaka oo ah caasimaddii Bariga Bengal iyo Assam waxayna soo bandhigeen dhaqdhaqaaqii gobonimo-doonka ee Hindiya. Shirweynihii waxbarashada Hindiya oo dhan ee Dhaka sanadkii 1906 ayaa lagu aasaasay All Indian Muslim League. Jaamacadda Dacca waxay heshay sumcad sida Oxford ee Bariga sannadihii ugu horreeyay. Dhaka waxay noqotay caasimada Bariga Pakistaan ​​kadib Qaybtii Ingriiska Hindiya 1947. Kordhinta khilaaf siyaasadeed iyo dhaqan ee Galbeedka Baakistaan ​​ayaa dhaliyay dhaqdhaqaaqii wadaniga ahaa ee Bengali ee cilmaaniga ahaa 1950-kii. Dagaalkii Xoreynta Bangladesh ee 1971 wuxuu aasaasay Dhaka caasimadda cusub ee qaranka.
Ilaa xornimadii, magaaladu si weyn ayey u ballaarisay furitaankii dhismaha xarunta Louis Kahn ee Sher-e-Bangla Nagar, kororka xaafadaha casriga casriga ah ee Waqooyiga Dhaka iyo magaalooyinka dayax-gacmeedka dadku ku badan yahay. Waxay ahayd halka uu ku dhashay Ururka Koonfurta Aasiya ee Iskaashiga Gobolka 1985. Kobaca dhaqaalaha Bangladesh wuxuu keenay ganacsi iyo maalgashi shisheeye. Dhaka ayaa wali wajaheysa caqabado badan. Farqiga u dhexeeya taajiriinta iyo faqiirka ayaa sii ballaaranaya. Sodon daqiiqo rickshaw raacid ah ayaa kaa qaadi karta magaalooyinka faro ba'an ee u dhow Old Dhaka ilaa xaafadaha fasalka sare ee gulshan iyo Banani, halkaas oo cunnada ay ka qaalisan tahay waxa dadka badankood soo gala maalintii.
The cimilada waa kuleyl-kuleyl - kulul oo aad u qoyan inta lagu jiro xilliga monsoon ee xagaaga (Abriil-Sebtember) iyo qalayl iyo qabow xilliga qaboobaha (Oktoobar – Maarso). Soo-booqdayaasha ka socda wadamada qabow waxaa laga yaabaa inay rabaan inay soo booqdaan xilliga qaboobaha marka heerkulku yahay 20 ° C qoyaankuna hooseeyo (qiyaastii 60-70%). Roobabka badankood waxay dhacaan inta udhaxeysa May iyo Oktoobar. Wasakheynta hawada iyo biyaha ee ka imaaneysa ciriiriga taraafikada iyo qashinka warshadaha ayaa ah dhibaatooyin culus oo saameynaya magaalada. Ceega cufan ayaa badanaa la arkaa inta udhaxeysa Nofeembar iyo Janaayo, wuxuuna carqaladeyn karaa duulimaadyada iyo gaadiidka doomaha.
Farshaxan ku yaal Kaniisadda Armenia, oo la dhisay 1781
Kuwa soosocda waa xulasho shaqooyin caan ah oo magaalada laga dejiyay:
Abaalmarinta abaalmarinta Tahmima Anam Casrigi Dahabiga ahaa waxaa lagu dejiyay Dhaka intii lagu jiray Dagaalkii Xoreynta 1971, oo muujinaya xilligii qalalaasaha iyadoo loo marayo indhaha hal qoys.
Dilruba Ahmed's Dhaka Boorka ayaa ku guulaystay Abaalmarinta Bakeless 2010 ee Gabayada. Isaga oo u kala gooshaya Yurub iyo Ameerika ilaa waddooyinka caasimada Bangladesh, maansooyinkeeda af-miishaarka leh waxay isku daraan codadka muwaadinnimada adduunka iyo kuwa deggan magaalada Dhaka.
K. Anis Ahmed's Habeen wanaagsan, Mr. Kissinger raadraaca taariikhda casriga ah ee Dhaka laga soo bilaabo heerka ay ahayd magaalo madax gobol 1970kii ilaa megacity maanta dad badani ku badan yahay.
Qoraaga reer Bengali ee Akhtaruzzaman Elias's Askariga Jiifa wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa safarkii nin intii lagu jiray xilligii qalalaasaha ka hor xorriyadda Bangladesh. Riwaayaddu sidoo kale waxay ka kooban tahay waxa la odhan karo waa sharraxaadda ugu saxsan ee nolosha Old Dhaka.
Shaqooyinka la tarjumay abwaanka ku guuleystay abaalmarinta Shamsur Rahman.
Amitava Ghosh Khadadka Hooska waxaa ka mid ah sharaxaad cad oo ku saabsan Dhaka horaantii 1960s, oo looga soo horjeeday aaggii rabshadaha Hindu-Muslim ee 1963-64.
Shazia Omar's Sida A Diamond ee Cirka wuxuu ka hadlayaa ku xadgudubka daroogada dhalinyarada Dhaka iyo deegaan ay ka tagtay dowlad musuqmaasuq ah oo is-doon doon ah.
Diyaarad Biman ah oo ku taal Hazrat Shahjalal International Airport
Madaarka Caalamiga ah ee Hazrat Shahjalal. waa garoonka diyaaradaha aasaasiga ah ee u adeega Dhaka. Waxay leedahay duulimaadyo caalami ah oo joogto ah oo ka kala yimaada London, Istanbul, Dubai, Singapore, Hong Kong, Colombo, Kuala Lumpur, Bangkok, Karachi, Mumbai, Delhi, Kolkata, Yangon iyo Kathmandu. Waxa kale oo jira duulimaadyo aada Paro oo ku taal Bhutan, Malé oo ku taal Maldives iyo Kunming oo ku taal gobolka Yunnan ee Shiinaha. Gegada diyaaraduhu waxay leeyihiin gaadiid muhiim ah Bariga Dhexe, oo ay ku jiraan Muscat, Jeddah, Doha, Bahrain iyo Kuwait. Shirkadda diyaaradaha ee qaranka Biman waxay duulimaad ku tagtaa 21 magaalo oo ku yaal Yurub iyo Aasiya; halka kuwa gaarka loo leeyahay ee Bangladesh ay duulimaadyo goboleed ka dhex wadaan Koonfurta iyo Koonfur-bari Aasiya. Hazrat Shahjalal waa garoon diyaaradeed oo casri ah waxtarna leh. Si kastaba ha noqotee, socdaalku wuxuu qaadan karaa mid caan ah waqti dheer inta lagu jiro saacadaha ugu badan. Haddii aad ka wareejineyso caalamiga oo aad u gudbeyso maxalliga gudaha, iska ilaali saraakiisha garoonka diyaaradaha ee saldhigga iskaanka (ka hor inta aan la gaarin maxalliga) kuwaas oo kuu sheegi doona in teerminaalka waddanku xiran yahay, kaa dhigo mid fadhiista, ka dibna isku dayo inuu kaa qaato laaluush. Hadday taasi dhacdo, kac, oo dhaqso uga bax albaabbada oo u leexo dhinaca midig ee xarunta guriga. Markaad gudaha gasho, wuu ku raaci karaa, laakiin cod dheer ugu sheeg inuu kaa tago. Wuu dib u laaban doonaa wuxuuna ku laaban doonaa saldhigiisa. Duulimaadyada gudaha waxay isku xiraan shan magaalo oo dalka gudihiisa ah.
Tareen ku raac Dhaka
Dhaka waa xudunta Wadooyinka Tareenka Bangladesh, ku dhowaad dhammaan magaalooyinka waaweyn waxay leeyihiin ugu yaraan 2-3 adeegyo toos ah maalin kasta, oo ay ku jiraan tareeno ka yimaada Chittagong iyo Sylhet. Labada tareen maalin iyo habeenba waa la heli karaa. Xiriirka kaliya ee caalamiga ah waa Kolkata, India, halkaasoo laga Maitree Express tagaa subaxa hore, saddex jeer usbuucii.
Wadooyinka Tareenka ee Bangladesh waxay leeyihiin adeegga tigidhka elektaroonigga ah, laakiin waxay kaliya ku shaqeysaa kaararka deynta guryaha iyo lambarrada taleefannada. Sharadka ugufiican ee dalxiisyaashu waa inaad boos ka dhigato saldhigga ama wakaaladda socdaalka. Tareenadu waa caan sidaa darteed horay u sii sii ballanso.
Basasku waa nooc caan ah oo ah iskutallaabyada iskutallaabta Bangladesh. Basaska raaxada AC ayaa maalin kasta u kala goosha Dhaka iyo magaalooyinka kale ee Bangladesh, oo ay ka mid yihiin Chittagong, Khulna, Bogra, Jessore, Rajshahi, Cox's Bazar iyo Sylhet, iyo sidoo kale magaalooyinka India ee Kolkata iyo Agartala. Tigidhada waxay ku baxaan Tk 800-1200. Tirooyinka tigidhada waxay ku yaalliin magaalada oo dhan, gaar ahaan Panthapath iyo Arambagh meelaha. Basaska aan AC-ka ahayn waxay u safraan magaalo kasta oo waaweyn oo dalka ah. Waxaa jira dhowr terminaal oo ku yaal daafaha Dhaka oo u adeega gobol kale oo Bangladesh ah. Sayedabad waxay u adeegtaa basaska u kala goosha Dhaka iyo qaybaha bari ee Sylhet iyo Chittagong. Gabtali waxaa loogu talagalay basaska u socdaalaya Dhaka iyo qaybaha galbeed ee Rajshahi, Rangpur iyo Khulna. Mohakhali waxay u adeegtaa basaska ku wareega agagaarka Qeybta Dhaka, oo ay ku jiraan degmooyinka Mymensingh iyo Tangail.
Shohagh, 63 DIT Wadada Malibagh. Adeegyada maalinlaha ah ee Chittagong, Sylhet, Khulna, Cox's Bazaar, Jessore iyo Kolkata
Khadka Cagaaran, 9/2, Wadada Wareegtada ah ee Dibedda, Momen Bagh, Rajarbagh. Adeegyada maalinlaha ah ee Chittagong, Kolkata, Sylhet, Cox's Bazaar, Khulna iyo Bogra
Baqdaad Express, Tirinta Arambagh iyo Kalabagan. Adeegyada maalinlaha ah ee Chittagong iyo Cox's Bazar
Shirkadda Wadooyinka Bangladesh (BRTC), 21 Rajuk Avenue. BRTC waxay ka shaqeysaa Adeega Basaska Caalamiga ah laba jeer maalin kasta iyadoo lala adeegsado Kolkata iyo adeegyada loo qorsheeyay Agartala
Dhaka waa barta xudunta u ah nidaamka waddooyinka waaweyn ee waddanka Bangladesh. Xuduudaha caalamiga ah ee ugu dhow magaalada waa Xuduuda Akhaura / Agartala ee Waqooyiga-bari ee Hindiya iyo Benapole / Benapole oo la leh gobolka Indian ee West Bengal. Baabuurta waxaa loo isticmaali karaa in looga safro xadka Hindiya; laakiin xadka uu la wadaago Myanmar ayaa wali xidhan.
Uumiyaha gantaalaha ee dekedda webiga ee Sadarghat oo mashquul badan
Doomaha badankood waxay yimaadaan oo ka baxaan dekedda Sadarghat. Aaggan iyo jidadka ku hareeraysan ayaa si aan la rumaysan karin u badan, markaa u oggolow waqti badan oo isha ku hay waxyaabaha qiimaha leh. Haddii aad timaaddo dekedda, u dagaallami dhinacaaga bidix ee wadada hor-marta ka dibna samee midigta koowaad; kani wuxuu isu rogayaa Nawabpur Road wuxuuna u socdaa woqooyiga hudheelada. Xitaa haddii aadan joogin aaggan, way fududahay inaad u lugeeysid dhowr boqol oo mitir woqooyi si aad uhesho rickshaw ama taksi socda; kuwa ka agdhow dekedda ayaa istaaga joogtada ah.
Gaadiidka wabiga ee casriga ah ee loo maro dekadaha waaweyn ee webiga ee Bangladesh sida Chandpur, Minibar (Khamriga waa laga saaray), Cuntada Xalaal waxaa laga dalban karaa Makhaayadaha Xalaal ee u dhow. eHalal waxay bixin doontaa liis faahfaahsan oo ah makhaayadaha Xalaal ee u dhow qiimaynta hantida waxayna Khulna ka tagtaa dhawr jeer maalintii oo ka timaadda wabiga Sadarghat ee Dhaka. Gaadiid catamaran oo degdeg ah oo casri ah ayaa loo heli karaa meelahaas oo laga yaabo inay dalbadaan qiimaha jaban. Kataamaradan degdega ah waxay Barisal ku gaaraan 6 saacadood gudahood marka laga tago Dhaka Sadarghat terminal (bixitaanka subaxdu inta badan waa 8 AM). Qiimaha caadiga ah waa Tk.700 iyo qiimaha Fasalka Ganacsiga waa Tk.1000 laga bilaabo badhtamihii 2018. Mid baa tikidhada ka iibsan kara onlayn, inta badan hudheelada hudheelka ayaa kaa caawin kara tigidhada. Dadka ka shaqeeya baska Khadka Cagaaran ayaa iyaguna leh adeegga Catamaran ee degdega ah - fadlan ka fiiri macluumaadka xiriirka ee kor ku yaal qaybta baska.
Muddo yar oo gumaysi ah uumiyaha gantaalaha ka tag Dhaka ilaa Barisal, Hularhat, Morrelganj iyo Khulna dhowr jeer usbuucii, kana taga Sadarghat 18:00. Laga bilaabo Diseembar 2018, waxaa jira hal uumiye ah usbuucii oo loo maro wadada dhan ee Khulna (waxay qaadataa 26-30 saacadood), laakiin inta badan maalmaha kale waxaad ugu yaraan tagi kartaa Hularhat, ka dibna isticmaal gaadiid maxalli ah oo taga Khulna (2 saacadood). Tigidhada waa in lagu dalbado leh BIWTA xafiiska Motijheel, dhanka bari ee Dilkusha Circle I. Waxay furantahay ilaa 17:00 inta udhaxeysa Axada iyo Arbacada iyo ilaa 14:00 Khamiista; halka uu xirmay maalintii jimcaha.
Haddii aad qorsheyneyso inaad ka gudubto wabiyada adoo u socdaalaya koonfurta Bangladesh gaari adigoo ka socda Dhaka, u gudub dekadaha doonta ee Mawa iyo Aricha ee wabiga Padma.
Marka la eego tirada noocyada kala duwan ee gaadiidka, haddii aad dhib ku qabto helitaanka qiimo jaban oo darawal aad ku socoto dhowr mitir kan xiga. Dhammaantood uma socdaan inay ku raaxaystaan, markaa si fiican ayaa loo heli karaa kuwa daacadda ah oo aad siisaa ganacsigaaga. Mararka qaarkood darawalku wuxuu dalbaa lacag badan imaatinkiisa; sida ugu wanaagsan ee tan lagula tacaali karo waa in la dhiibo qiimaha lagu heshiiyey ama cabirka laga bixiyo oo la iska tago. Xaqiiji bilowga inuu darawalku ogyahay halka aad u socoto (inaad adigu adigu toos u toosin kartid mooyee) - waxay badanaaba leeyihiin aqoon xaddidan oo maxalli ah, laakiin waxay had iyo jeer odhan doonaan inay garanayaan meesha meel ku taal, oo ay kugu wareejinayaan magaalada oo dhan iyagoo raadinaya halka mitirku sax yahay. Hubso inaad qaadato kaar ay ku qoran yihiin hudheelkaaga ama hoteelkaaga si aad dhabtii guriga ugu noqoto. Haysashada kaarka hudheelka oo leh cinwaanka dhabta ah waxay tan ka dhigaysaa wax badan oo fudud.
Tareennada Bangladesh waxay ka shaqeeyaan oo keliya inta u dhexeysa magaalooyinka waaweyn ee gobolka. Ma jiro nidaam tareenka magaalada dhex mara ama metro ku yaal Dhaka, in kasta oo safka ugu horreeya ee nidaamka mitrooga la qorsheeyay inuu furmo sannadka 2019. Maaddaama la'aanta marin dadweyne oo hagaagsan, Dhaka ay la ildaran tahay saxmada taraafikada. Badanaa, meelaha qaar ee magaalada waxay noqon karaan kuwo xirma dhowr saacadood.
Rickshaw wareeg ah oo hor taal Curzon Hall, Jaamacadda Dhaka
Cycle-rickshaws ama si fudud, rickshaws, waa nooca ugu caansan ee gaadiidka, waxayna ku fiican yihiin masaafooyinka gaagaaban, inta badan waddooyinka dhinacyada. Waxay ka kooban yihiin inta badan taraafikada magaalada, waxayna ka qaadaan qiyaastii Tk 15 kiiloomitir. Gorgortanka safarka kahor waa lagama maarmaan ajnabi ahaan. Rickshaws ee meelaha hodanka ah sida Banani iyo Gulshan badanaa waa inay siiyaan ragga maafiyada maxalliga ah mudnaanta ay ugu adeegaan aagagga qiimaha badan. Tani waxay mararka qaarkood macnaheedu noqon karaa in darawalladu ay ka baqaan inay rakaab u raacaan aagaggan. Tani waa dhif iyo naadir. Hal ama laba fudud, laakiin adag, hoos u dhac ayaa guud ahaan xallin doona xaaladda. Haddii aad tahay qof dumar ah, waa wax aan la arki karin inaad keligaa ku dhex wareegto rickshaws ka dib mugdiga; waxaad tahay bartilmaameed tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u weydiisanaya dhibaatada tuugada iyo tuugada. Halkii tag taxi jaale ah.
Gaari ku dhex wadista caasimada waxay noqon kartaa khibrad wareer badan. Rasmi ahaan, baabuurtu waxay ku socdaan bidix, in kasta oo xaqiiqadu ka duwanaan karto. Dadka maxalliga ah ayaa inta badan hoos u soo jiidaya dhinaca qaldan ee wadada iyagoo isku dayaya inay ka adkaadaan taraafikada. Booliska taraafikada ayaa kormeera inta badan isgoysyada magaalada, iyagoo isku dayaya inay sii wadaan taraafikada. Isgoysyo badan ayaa lagu casriyeeyay calaamadaha taraafikada, laakiin kuwaan waxaa inta badan iska indhatira wadayaasha iyo booliska taraafikada, oo gawaarida u kala hagaya sida ay iyagu ku habboon yihiin.
Waxaa jira xulashooyinka qaarkood ee kirada baabuurta, iyadoo Europcar uu yahay magaca caanka ah ee reer Galbeedka. Websaydhka dawladda ee 'Virtual Bangladesh' ayaa leh xulashooyin badan. Shirkado badan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay bixiyaan ikhtiyaarka kireynta-darawal dhowr maalmood; waa wax iska caadi ah inta badan dadka dhexe iyo kuwa dabaqadda sare in ay leeyihiin wadayaal u gaar ah.
Auto-rickshaws, oo deegaanka looga yaqaan 'CNGs' (oo loogu magac daray gaaska dabiiciga ah ee la cadaadiyey, halka laga soo saaro shidaalka) sidoo kale waa badan yihiin waxayna leeyihiin mitirro, taasoo darawalada mararka qaar lagu qancin karo inay isticmaalaan. Waa habka ugu jaban ee lagu daboolo masaafada dheer; 8 Km oo laga raaco Old Dhaka ilaa Gulshan waa inuu ku kacaa Tk 150-200. Mitirradu waxay ka bilaabmayaan Tk 13.50, laakiin waxay u badan tahay inaad gorgortan ka gasho qiimaha. Magaaladu waxay noqotay mid ciriiri badan mararka qaar, markaa u oggolow waqti badan inaad ku soo wareegto.
Tagaasida ayaa mara waddooyinka, qaar waa jaalle qaarna waa madow yihiin, dhammaantoodna waxay leeyihiin mitirro. Tagaasida madow waxay mitirka ka bilaabayaan Tk 15 halka tagaasida jaallaha ah ay waxyar ka sareeyaan xagga raaxada, waxayna ka bilaabanayaan Tk 20. Tagaasida madow ayaa caadiyan ku jira xaalad liita oo aan qaboojiye lahayn. Tagaasida huruudda ah waxaa looga baahan yahay inay lahaadaan qaboojiye; raxanku waxay ka kooban yihiin inta badan Toyota Corollas, oo ay la socdaan qaar ka mid ah Mitsubishis iyo Hondas. Tagaasida huruudda ah ayaa sidoo kale loo arkaa inay ka amni badan yihiin, marka loo eego taksiyada madow iyo gawaarida loo yaqaan 'auto-rickshaws'.
Bas u raac Dhaka
Basasku waxay maraan waddooyin waaweyn waddooyinka waaweyn, laakiin waxay yihiin kuwo si aad ah u camiran oo buuq badan, oo lagu saxeexay oo keliya Bengaali mana u badan tahay inay wax badan u tarayaan dadka safraya. Basaska sidoo kale had iyo jeer waxay ku lug yeeshaan shilalka. Naftaada badbaadi madax xanuun oo qaado rickshaw, ama masaafo dheer, bas raaxo leh, bas-hawo leh ama tareen.
Dad badan oo deegaanka ka tirsan oo dabaqado hoose ah ayaa badanaa u adeegsada baaskiil qaab gaadiid aasaasi ah. Waxay faa'iido u lahaan karaan awooddooda inay isku tuuraan xaaladaha adag, halkaasoo taraafikada ay ka horjoogsan karto gaari weyn inuu dhaqaaqo. Qaar ka mid ah waddooyinka cusub ee caasimadda waxay leeyihiin laba waddo oo baaskiil / rickshaw ah. In kastoo, ay yar tahay fursad lagu iibsado ama lagu kireysto baaskiil, marka lagu daro waddooyinka iyo taraafikada ayaa ku jira xaalad aad u xun oo fursadda shilku ay sarreyso.
Mararka qaar, socodka ayaa dhab ahaan noqon kara habka ugu dhaqsaha badan ee looga baxo barta A ilaa B. Had iyo jeer hubi inaad ku socoto cagta, ama haddii aan mid la heli karin, illaa iyo dhinaca wadada inta suurtagal ah. Wadadu waa meel halis ah oo ku taal Dhaka, dad badan oo lugeynaya badanaaba waxaa ku dhaawacma darawalada dadban. Kuwa ku xeel dheer wasakheynta ama qaba cudurka neefta waxay u baahan karaan inay xirtaan maaskaro; wasakheynta hawada ee ka timaadda gawaarida waaweyn iyo basaska, oo ay weheliso kuleylka sii kordhaya iyo qoyaanka ayaa mararka qaar noqon kara mid culus.
Dhismaha caasimada ee Louis Kahn wuxuu ahaa aragtidiisa magaalo casri ah oo reer Bengali ah, oo leh wadiiqooyin isdabajoog ah iyo jardiinooyin
Isku-xirka Caasimadda Degmooyinka baarlamaanka, oo ku taal guriga baarlamaanka qaranka iyo hoyga rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha. Waa mid ka mid ah dhismayaasha sharci dejinta ee ugu weyn adduunka waxayna leedahay dhul aad u ballaaran oo leh beero iyo harooyin. Dhismuhu waa mid ka mid ah shaqooyinka loo dabaaldego ee naqshadeeyaha reer Mareykan ee Louis I Kahn, kaasoo isku darsaday casriyeynta gobolka iyo hidaha dhismaha ee hore iyo juqraafiyada webiyada ee Bangladesh. Baarlamaanku wuxuu u furan yahay booqashada dalxiisayaasha ajnabiga ah laga bilaabo Axadda ilaa Khamiista inta u dhexeysa 9 subaxnimo iyo 5 galabnimo. Soo-booqdayaashu waa inay wataan nuqul ka mid ah baasaboorkooda iyo fiisaha oo ay u soo gudbiyaan khidmadda Tk 600 soo dhaweynta baarlamaanka ee dhismaha weyn.
Matxafka Dagaalkii Xorriyadda, 5 Segun Bagicha. Abriil-Oktoobar: 10 AM-6PM; Nofeembar-Mar: 10 subaxnimo-5 galabnimo Waa Axad xiran .. Madxaf caan ah oo caan ah kaas oo diiwaangeliyey halgankii xoreynta Bangladesh ee Pakistan 1971, oo ay kujiraan xasuuqii Bangladesh 1971 iyo dhaqdhaqaaqii iska caabinta siyaasadeed iyo hubeysan ee dadka Bangladesh.
Madxafka Qaranka Bangladesh Hoy u ah ururinta farshaxanka qadiimiga ah ee laga soo bilaabo xilligii Hindu-Buddhist ee Bengal kahor Islaamka.
Qalcadda Lalbagh Qarnigii 17aad oo aan la dhammaystirin Mughal oo ku yaal Old Dhaka, oo leh matxaf, teendho, masjid iyo qabriga Pari Bibi.
Qasriga Ahsan Manzil Hoygii rasmiga ahaa ee rasmiga ahaa ee Qoyska Dhaka Nawab iyo goobta munaasabado badan oo siyaasadeed iyo bulsheed oo muhiim ah intii lagu gudajiray British Raj, oo ay kujiraan shirkii ugu horeeyay ee All Indian Muslim League iyo kubbado badan oo lagu martigaliyay kuxigeenka Hindiya.
Aagga Jaamacadda Dhaka Xarunta taariikhiga ah ee jaamacaddu waxay xudun u ahayd halgankii Bangladesh ee aayo-ka-tashiga. Jaamacadda Dhaka waxaa aasaasay dowladda Ingiriiska sanadkii 1921 waxaana mar la oran jiray Oxford ee Bariga. Waxay leedahay dhowr dhisme oo gumeysi oo caan ah, oo ay ku jiraan Curzon Hall, oo loogu magac daray Lord Curzon, kuxigeenka Hindiya (1899-1905). Hoolka waa mucjiso dhismeedka Yurub-Mughal ee soo ifbaxay Qeybtii ugu horreysay ee Bengal sanadkii 1905. Guriga Burdwan wuxuu hoy u yahay Bangla Academy. Xarunta waxay sidoo kale martigelisaa Central Shaheed Minar, oo ah taallo qaran oo loogu talagalay Dhaqdhaqaaqa Luqadda Bengali; iyo sidoo kale qabriga Abwaanka Qaranka Kazi Nazrul Islam.
Suhrawardy Udyan Beer weyn oo taariikhi ah oo ku taal Ramna oo martigalisa dhowr goobood; oo ay ku jiraan Masjidka Shahbaz Khan, oo uu dhisay ganacsade taajir ah 1679; qabuuraha saddexda raiisal wasaare ee Bengal- AK Fazlul Huq, HS Suhrawardy iyo Sir Khawaja Nazimuddin; iyo Xuskii Xoriyada, halkaasoo ay Is dhiibitaanka Pakistan ka dhacday 16kii Diseembar 1971 ciidamadii xulafada ee Bangladesh iyo India, taas oo calaamadeysay dhamaadka Dagaalkii Xoreynta Bangladesh.
Matxafka Bangabandhu Memorial Hoyga aabihii aasaasay Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman (oo loo yaqaan Bangabandhu or Saaxiib Bengal), oo lagu dilay gurigan isaga iyo inta badan qoyskiisa 15 Ogosto 1975. Hadda matxaf, guriga Mujib wuxuu soo bandhigayaa nolosha madaxweynihii ugu horreeyay ee Bangladesh.
Xuska Shuhadada Qaranka Xusuusta dagaalka qaran wuxuu ku yaal duleedka Dhaka ee Savar. Waa taallo casri ah oo leh beero iyo harooyin halka ubaxyada biyaha ubaxa qaranku ay badanaa kabaxaan. Meelaha lagu xasuusto waxay bixiyaan nabad galyo ka timid fowdo waalan ee Dhaka.
Kaniisada Armenia ee Qiyaame Quduuska ah Kaniisada Armenia waxay ku talaa xaafada hore ee Armenia ee Dhaka, Kaniisada Armenia waxaa la dhisay 1781. Dhismaha kaniisaddu waa dhaxal ahaan dabaqadda ganacsade ee mar ahaan jirtay ganacsade Dhaka. Waxay leedahay qabuuro ay ku xardhan yihiin farshaxanno iyo farshaxanno reer Yurub ah.
Macbadka Qaranka Dhakeswari Macbudkii Hindu ee qarnigii 12aad oo loogu talagalay Goddess Shiva. Waxay ku taal Old Dhaka waana meesha ay ku taalo wadaadada diinta Hinduuga ee Bangladesh.
Minarets-ka Husaini Dalan, oo ah fadhiga bulshada Shiicada laga tirada badan yahay
Hussaini Dalan Waxaa la dhisay 1642, Husaini Dalan waa fadhiga Imaamka bulshada Shiicada Dhaka
Bara iyo Choto Katras The Katras waxay ahaayeen gawaarida magaalada ee xukunka Mughal. Kuwa ugu caansan waxay ahaayeen Bara Katra (Caravansary Weyn) iyo Choto Katra oo yar (Caravansary Young). Waxaa la dhisay 1643 iyo 1663 siday u kala horreeyaan, waxay martigeliyeen baayacmushtariyaal iyo safarrayaal qarniyo badan. Maanta, qayb yar oo kaliya oo ka mid ah qaabdhismeedyadii asalka ahaa ayaa weli taagan oo waa weyn oo burbursan.
Masaajidka Khan Mohammad Mridha Masjid taariikhi ah oo sifiican loo ilaaliyay oo kuyaala Wadada Lalbagh. Waxay ku taal sagxad sare oo leh jaranjaro dhanka bari ah, irrid qaanso ah iyo irrid dhexe. Qoraallada Beershiya ee qotonkeeda iyo Mihrab waxay ka hadlayaan dhismaheeda sanadkii 1705.
Masaajidka Xiddigaha Masjid hore loo sharraxay horraantii qarnigii 19aad oo ku yaal xaafadda Armenia oo lagu qurxiyey xiddigyo buluug ah.
Masjidka Binat Bibi waa masjidkii ugu da'da weynaa ee soo noolaada magaalada Dhaka, oo ka soo bilawday Saldanadii Bengal. Waxaa la dhisay sanadkii 1454-kii waxaana dhisay Bakht Binat xukunkii Sultan Nasiruddin Mahmud Shah. Waxay ku taal agagaarka Buundada Hayat Bepari ee aagga Narinda.
Masaajidka Kartalab Khan Waxay ku taal aagga Begum Bazar ee Old Dhaka. Waxaa dhistay Murshid Quli Khan, gudoomiyihii ugu dambeeyay ee Mughal iyo Nawab ugu horeysay ee Bengal.
Masjidka Imperial Chowkbazaar Mid kamid ah masaajida ugu waawayn Old Dhaka. Waxaa asal ahaan dhisay Mughal goveror Shaista Khan sanadkii 1676.
Gurdwara Nanak Shahi Waxaa la dhisay 1830, waa macbadka ugu weyn ee Sikh ee ku yaal Bangladesh wuxuuna xusaa booqashadii Guru Nanak, aasaasihii Sikhism, uu ku tagay Bengal qarnigii 14aad.
Dhamaadka Buushka Buddhist Monastery Waxay ku taalaa Wadada Atish Dipankar ee Badda, waa keniisad ugu weyn Buddhist monastery.
Jardiinada Ramna or Ramna Green Mid ka mid ah jardiinooyinka ugu waaweyn ee ku yaal Dhaka, oo loo arko inay u dhigmayaan magaalada Maidan ee Kolkata iyo Central Park City ee Magaalada New York. Aaggan ballaadhan ee ballaadhan wuxuu ahaa goobtii Mughal jardiinooyin iyo qabuuro ka hor intaanay noqon baarkinka dadweynaha iyo koorsada tartanka intii lagu jiray xukunkii Ingiriiska. Aagga ballaadhan ee Ramna waxaa sidoo kale ku jira Maxkamadda Sare ee Bangladesh iyo Naadiga Dhaka.
Beerta Baldha Waxaa aasaasay 1909 zamindar Hindu ah, Beerta Baldha ee Wari, Old Dhaka waxay leedahay ururinta 672 nooc oo dhir ah waana mid ka mid ah jardiinooyinka dhirta ugu da'da weyn dalka.
Hatirjheel Nidaam gaadiid casriyeyn goboleed ku yaal bartamaha Dhaka oo leh buundooyin fara badan, isgoysyo waaweyn iyo hareeraha harada weyn ee dabiiciga ah.
Xayawaanka Dhaka Beerta xayawaanka magaalada ayaa leh dhowr shabeel oo Bengal ah. Xidhan Axada.
Planetarium Dhaka Xaaladda farshaxanka farshaxanka ee loogu magac daray Sheekh Mujibur Raxmaan waxay ku taal agagaarka baarlamaanka ee Dhaka / Bartamaha.
Maxaa laga sameeyaa Dhaka
Booqo meelaha soo socda ee caanka ah ee Dhaka, ka eeg 'Dhismooyinka' korka ka eeg.
Waxaa jira dhowr jardiinooyin madadaalo ah gudaha iyo hareeraha Magaalada Dhaka.
Beerta Shahbag Shishu
Haddii aad dukaameysato oo aad u diyaar garowdo inaad gorgortan gasho waxaa hubaal ah in gorgortan laga dhex heli karo suuqyada iyo suuqyada Dhaka. Si aad u dareento waxa ay tahay inay ku kacaan suuqyada maxalliga ah hubi qiimaha dukaamada qiimaha go'an ee qaabka reer galbeedka ka dibna ka jar 10%. Haddii aad doorbideyso dukaamaysiga bilaashka ah ee dhibka leh markaa u gudub Magaalada Bashundhara, ama Jamuna Future Park, laba Xarumood oo wax -iibsi oo waaweyn, oo leh dukaamo casri ah iyo adeegyo kale oo aad filan karto inaad ka hesho suuq.
Dhar ilbiriqsiyo ah, Banga Bazar iyo Suuqa Pallwell (BB: Aagga Gulistan, Galbeedka Motijheel kaliya); PM: Aagga Purana Paltan (oo kaliya ku ag yaal Aqalka Shidaalka ee Jonaki). Waxyaabo badan ayaa leh cilado yar yar, laakiin ma buuxiyaan shuruudaha dhoofinta.
Aarong. Silsilad caan ah oo dhowr warbaahineed oo agagaarka Dhaka ah iyo mid London ku taal. Waxaa iska leh BRAC (Ururka ugu weyn ee Horumarinta adduunka) waxayna ku iibisaa farshaxan gacmeed iyo dhar qiime dhexdhexaad ah.
Dhaka waxay leedahay noocyo badan oo raashin ah oo loogu talagalay dhammaan miisaaniyadaha. Old Dhaka waxaa ku qulqulaya raashin Bangladesh oo raqiis ah halkaas oo cunada ay ku kacayso laga bilaabo Tk 50. Meelaha kor u kaca sida Gulshan iyo Banani waxaa ka jira Shiine, Hindi, Thai, Vietnamese, Greek iyo Mexico makhaayado, iyo xayeysiisyada sida Pizza Hut iyo KFC - dhammaantood oo ah qiimayaal badankood aysan awoodin. Boos celintu badanaa looma baahna makhaayadaha badankood. In badan oo ka mid ah maqaayadaha u eg Buffet-ka ee aaggan ku yaal waxay leeyihiin Tk 250-400, menu qiimo go'an.
Macmacaanada deegaanka (misti / mishti) sida rasogollah iyo golap jam / pantuya / ledikeni waa heer sare, kuwani waa kubbado caano jilicsan oo jilicsan oo la qooyay (lagu qooyay) sharoobada, waxayna ku yimaadaan noocyo cad iyo casaan. Dukaamada magaalada oo dhan (iyo gaar ahaan agagaarka Gulshan) waxay ku iibiyaan xawaashyada laga keeno Dubai, Europe, Malaysia iyo USA qiimo jaban. Shukulaatada la soo dhoofiyo ayaa qaasatan qaali ah - oo badiyaa ma ahan xaalada ugu wanaagsan maadaama ay dhalaalayso oo dib loo adkeeyay maalin kasta kuleylka kuleylaha. Fresh ayaa ka fiican.
Ka taxaddar marka aad cuntada ka iibsaneyso kuwa jidadka wax ku iibiya maaddaama heerarka caafimaadka iyo nadaafaddu aysan had iyo jeer ahayn kuwa ugu sarreeya. Si ka duwan Bangkok-cuntada waddada ku taal ee Dhaka waxaa loogu talagalay oo keliya dadka deegaanka. Shisheeyayaashu waa inay ku ekaadaan meelaha waaweyn ee habeysan (abaabul (nasiib xumose wax yar qaali ah)).
Cunto dhaqameed Dhakaiya oo basbaas leh ayaa laga heli karaa gees kasta oo hore oo Dhaka ah. Qaar ka mid ah maqaayadaha biryani ee caanka ah magaalada hore waa:
Bakorkhani ama Bakharkhani waa shey rootiga dhaqameed laga heli karo gees kasta oo magaalada hore ah.
Kafee North End, Kha-47-1 Pragati Sarani, Shahzadpur, North Badda (Qiyaastii geeska laga galo safaaradda Mareykanka, kana soo horjeedda Kulliyadda Cambrian iyo ka sareysa ATM-ka DBBL). Toddoba maalmood 8 AM-9PM, marka laga reebo Talaadada oo xiran iyo Jimcaha 14:00 illaa 21:00. Xaqiiqdii kafeega ugufiican Dhaka. Lahaanshaha lahaanshaha shisheeye, mashiinka duban iyo jawaano waaweyn oo qaxwaha gadaashiisa ah, xaqiiqdii tani waa meesha lagu hagaajiyo kafeinkaaga. Qiimaha macquul ah. Cunto wali ma jirto, kaliya muufka iyo bunni. cappuccino Tk 125.
Halkee laga joogaa Dhaka
Waxaa jira xulashooyin aad u tiro badan oo hoy magaalada ah, oo ku kala duwan sariiraha jiifka ah ee qaaliga ah oo kaliya dhowr doolar, illaa hudheelo waawayn oo caalami ah oo leh guryo dabaqyo ah kumanaan doolarka Mareykanka ah habeenkiiba. Laga bilaabo Julaay 2016 waxaa Dacca ku yaal 70 hudheel.
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka Dhaka
Haddii ay dhacdo inaad timaadid Hazrat Shahjalal International Airport habeenkii, waxaa fiican inaad halkaas sii joogto ilaa subaxda. In kasta oo fursadaha wax kasta oo xun oo dhaca marka la baxo ay xoogaa yar yihiin, dhacdooyinka sida afduubka ay wadaan taksiilayaasha ayaa la ogyahay inay ku dhacday dalxiisayaal isku dayay inay ka baxaan garoonka saacadaha yar ee subaxnimada.
Haddii kale Dhaka ma aha mid aad u xun oo aan amaan ahayn, laakiin sida magaalo kasta oo weyn waa inaad ka warqabtaa hareerahaaga iskuna daydaa inaadan lugeyn habeenkii. Dadku waa saaxiibtinimo oo diyaar ayay u yihiin inay ku caawiyaan. Fursada khiyaanada waa yar tahay.
Waxaa jiray dhawaq dhawaanahan dhacdooyin ah bishii julaay 2007 oo ajaanibta qaar lala bartilmaameedsaday inay boorsooyin ka dhacaan iyagoo raacaya gawaarida rickshaws. Badanaa kuwani waxay dhaceen habeenkii, wixii ka dambeeya 23:00. Haddii ay tahay inaad banaanka ka maqnaato waqtigan ka dib fadlan sida ugu fiican ugu dadaal inaad uga tagto waxyaabahaaga qaaliga ah meelaha saaxiibadaa ama hudheelka waadna soo qaadan kartaa subaxa hore. Habka ugu fudud ee lagu yareyn karo qasaarahaaga suurtagalka ah waa inaadan marka horeba ula tagin waxyaabo qiimo leh haddii aad saadaaliso baahida safarka ka dib 23:00. Habka ugu amniga badan ee safarka dalxiis ayaa ah in la kiraysto cabs jaalle ah. Kuwani waa la kireysan karaa safarka iyo sidoo kale maalinta. Hubso inaad qorto nambarka taarikada.
Khatarta ugu weyn waxay u badan tahay inay ka timaado basaska xawaaraha ku socda iyo rickshaws - aad u feejignow markaad socoto waddooyinka waaweyn.
Ahaanshaha caasimadda, waa aagga inta badan ay saameysay intii lagu jiray hartals (shaqo joojin), waana inaad ku dadaashaa inaad ilaaliso astaan ​​hoose inta lagu jiro xilliyada qalalaasaha siyaasadeed. Ka fogow wax kasta oo nooc ka mid ah shirar waaweyn, xitaa kuwa wanaagsan, maaddaama ay jirto fursad wanaagsan oo aad ku noqon karto bartamaha dareenka oo aad u badan tahay inaadan taas ka rabin koox ka mid ah heesaha xunxun.
Booqo isbitaal ku yaal Dhaka
Wasakhda, sida inta badan magaalooyinka kale ee ku yaal qaaradda, ayaa sarreeya. Maaha wax aan caadi ahayn in la arko dad wajiga soo duubtay. Uguyaraan, waa inaad qaadataa maro gacanqaad ah si aad uqarsato afkaaga iyo sankaaga inta lagu jiro fuulista gawaarida rickshaw ama gaar ahaan maalmaha qoyan.
Isgaarsiinta magaalada Dhaka
Internet hadda si ballaaran ayaa looga heli karaa dhammaan Dhaka maqaayadaha internetka ee ku qarsoon dhismooyinka kala duwan ee wax iibsiga - hareeraha weydii. Tk 20-30 saacaddii.
CoFi 11 Cafe oo ku yaal Gulshan waxay macaamiisheeda siisaa adeeg internet oo xawaare sare leh & Khudaarta Bean Real ah, U wac 01713364499 si aad u hesho tilmaamaha.
Makhaayad kale oo cusub oo ku taal Mohakhali, oo ka soo horjeedda Jaamacadda Bariga Galbeed, oo loo yaqaan 'Newsroom Cafe' - ayaa macaamiishooda u siisa Wi-Fi iyo kioosyo bilaash ah. Wi-Fi bilaash ah ayaa sidoo kale laga heli karaa Kozmo Lounge oo ku yaal Dhanmondi.
Raadiyaha Foorti - 88.0 MHz
Raadiyaha Amar - 88.4 MHz
Raadiyaha ABC (Dhaka) - 89.2 MHz
Raadiyaha Maanta - 89.6 MHz
Bangladesh Betar (wuxuu sii gudbiyaa BBC World Service) - 100.0 MHz
Waxaa jira shan wargeys oo maxalli ah oo Ingiriis ah:
Safaaradaha & qunsuliyadaha
Australia, 184 Gulshan Ave, Gulshan-2,, fax: + 880 2 881 1125. Su-Th 8 AM-4PM (nasashada qadada 12:30 PM-1PM).
Brazil, Wadada 142, Symphony Tower, Gulshan 1,, fax: + 880 2 881 3000.
Canada, Guriga # 16A, Wadada # 48 Gulshan-2.
Denmark, Wadada 51, Guriga 1, Gulshan 2,, fax: + 880 2 882 3638.
France,, fax: +880 2 882 33 20.
Hindiya (Komishanka Sare ee Hindiya), Shirqoolka No. 1-3, Wadada Park, Minibar (Khamriga waa laga saaray), Cuntada Xalaasha ah waxaa laga dalban karaa Makhaayadaha Xalaal ee u dhow. eHalal waa inay bixisaa liis faahfaahsan oo ah makhaayadaha Xalaal ee u dhow hantida, Dhaka 1212. 09: 00-17: 00.
Turkey, Guriga No: 7 Wadada Maya: 2 Baridhara - Dhaka-1212,, fax: +880 2 984 38 73, ✉ safaarada.dhaka@mfa.gov.tr. Axad - Khamiis (09:00 - 13: 00) (14:00 - 18: 00). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Boqortooyada Ingiriiska, Wadada Qaramada Midoobay, Minibar (Khamriga waa laga saaray), Cuntada Xalaasha waxaa laga dalban karaa Makhaayadaha Xalaal ee u dhow. eHalal waa inay bixisaa liis faahfaahsan oo ah makhaayadaha Xalaal ee u dhow hantida, fax: + 880 2 882 3437.
United States, Meel Diblumaasiyadeed, Madani Ave, Minibar (Khamriga waa laga saaray), Cuntada Xalaasha waxaa laga dalban karaa Makhaayadaha Xalaal ee u dhow. eHalal waa inay bixisaa liis faahfaahsan oo ah makhaayadaha Xalaal ee u dhow hantida, fax: + 880 2 882-3744.
Iswidhan, Bay's Edgewater, Dabaqa 6-aad, Shirqoolka No. 12, North Avenue, Gulshan 2, Dhaka-1212,, fax: + 880 2 9852032.
Harada Ashulia - Waqooyiga Dhaka
Bogra - 220 km ayey u jirtaa magaalada Dhaka, oo ah caasimada hore ee Bangla
Comilla - Qabuuraha Dagaalkii Dunida, Kotbari Baddha Bihar, BIRD, Salban Bihar
Cox's Bazar - Xeebta badda ugu dheer adduunka.
Gopalgonj - halka uu ku dhashay aabihii qaranka Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
Beerta Qaranka Rejendrapur - 40 km waqooyi ka xigta Dhaka, baaxad weyn (1,600 hektar / 640 ha) kaynta madadaalada qaran oo leh duurjoog badan
Sundarbans, Satkhira, oo 350 KM u jirta Dhaka.
Sonargaon Haddii aad dareento baahida loo qabo inaad baxsato oo aad ka nasato fowdada Dhaka, Songargon, oo qiyaastii 29 km ah. Dhaka wuxuu ku siinayaa fursad aad ku sameyso taas. Magaaladu waxay leedahay dhowr aragtiyood oo qiimo leh oo midba midka kale ka go'an yahay isla markaana u socdaalaya araga iyo aragga, waxaad fursad u leedahay nolosha miyiga oo aad ku qaadan kartaa agagaaraha fowdada yar.
Hajiganj waa meel kale oo xiiso taariikhi ah leh, oo ku taal meel 10 km u jirta istaagga baska Mograpara. Si kastaba ha noqotee, meelaha kor ku xusan badanaa waxay qabsadaan inta badan maalinta waxaana ugu wanaagsan in lagu laabto Dhaka fiidka kahor. Sonargaon iyo Hajiganj waxaa la isugu dari karaa hal maalin haddii midkood goor hore ka ambo baxo Dhaka.
Baadhitaano Badan oo Xatooyo Xalaal ah
Hagaha Socdaalka Ko Tao Halal
Tilmaamaha Chittagong Xalaal
Tilmaamaha 'Cox's Bazar Halal Guide'
Hagaha Rajshahi Xalaal
Hoteelka Galbeedka La Vinci ee ugu Fiican Dhaka
Dhaka Regency Hotel & Dalxiis
Hotelka Westin Dhaka
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Bangladesh > Xalaal Safarka Dhaka
Ku soo dhowow magaalada NEOM
Fairmont Palliser	   
Tilmaamaha Safarka Xalaal ee St. Moritz Switzerland
eHalal.io waxay ku shaqeysaa Suuq Cunto Xalaal ah, Nidaamka Qorsheynta Kheyraadka Waxsoosaarka Xalaal (HERP) ee Nidaamka Bixinta Caalamiga ah, oo ku shaqeeya Ethereum Blockchain oo leh eHalal Token u gaar ah (oo hadda lagu kala iibsado € 1.75 ee 1 eHalal (HAL) cutubka lacagta loo yaqaan 'crypto currency unit) . Waxaan bixinnaa Qiimo dhimis dhan 2.5% haddii dhammaan macaamillada laga nadiifiyo midkood eHalal Tokens ama ETH.
Abuur eHalal & Wallet ETH